Aragtiga sharci ee hindise-sharciyeedka dembiyada Galmada (Jinsiga) la xiriira - Caasimada Online
Home Maqaalo Aragtiga sharci ee hindise-sharciyeedka dembiyada Galmada (Jinsiga) la xiriira
Maxay yihiin xaaladaha sharci, bulsho iyo dhaqan-dhaqaale ee hadda jira? Raad iyo saamayn ceynkee ah ayaa ka dhalanaya xeerka la dejinayo? Ma xallinaya mushkiladda jirta ee xeerka loo dejinayo?
Ma jiraa xeer kale ama xal kale oo sharci oo xallin kara mushkiladda iyo arrinta xeerka loo dejinayo?.
Maxaa qorshe siyaasadeed ah oo loo diyaariyay xallinta mushkiladda dhalisay xeer dejinta?.
Maxay tahay aragtida bulshada ee dhibaatada xeerka loo samaynayo? Ma jiraan xuluul ay soo bandhigeen ama soo jeediyeen bulshadu oo lagula tacaali karo arrinta xeerka loo dejinayo?
Siduu u guulaysan karaa qorshaha ama mashruuca xeereed ee la diyaarinayo? Ma guul-darreysan karaa?
Maxaa ka khladan hannaanka ama qaabka loo wajahayo caqabadda taagan ee xalka xeereed u baahan?.
In la ogaado dhibaatada si loo helo xalkeeda, waayoo cudurka marka la helo ayaa la daaweyn karaa.
In la tixgeliyo Dastuurka iyo sooyaalka sharci ee dalka, raadraacna laga dhigto.
In la diyaariyo qorshe siyaasadeed oo ku jaan-go’an ujeeddada xeer-dejinta.
In la qiimeeyo, la odoraso saameynta iyo raadadka maaliyadeed, bulsho iyo dhaqan-dhaqaale ee ka dhalanaya xeerka.
In la raaco hannaanka isbar-bardhigidda khatarta iyo faa’iidada(risk/benefit analysis).
In la soo bandhigo xulashooyin ama xuluul kala duwan oo lagu xallin karo dhibaatada loo samaynayo xeerka.
In la tashiyo lala sameeyo indheer-garad, xirfadleyda iyo guud ahaan bulshada.
In la diyaariyo warbixin qoto-dheer oo ku saabsan hannaanka loo maray daraasadda, wadatashiyada lala sameeyay qeybaha kala duwan ee bulshada.
In la diyaaryo mashruuc sharci oo si faah-faahsan u sharxaya xeerka la doonayo in la dejiyo, kadibna loo beddelo hindise-sharci si hay’adaha xeer-dejinta uga doodaan, talooyinkooda ugu daraan kadibna u ansixiyaan.
Mabda’a sharciyadda dembiga(principle of legality) ee dhigaya in aan dembi iyo ciqaabi sharci la’aan jireyn.
Dib-u-nogosho la’aanta sharciga ciqaabta(Principle of non-retroactivity).
Mabda’a isu-dhigmidda dembiga iyo ciqaabta(Principle of proportionality)
Mabda’a wargelinta iyo ogaysiinta Bulshada ee Xeerka(Principle of legal certainty)
Mabda’a ilaalinta xuquuqda muwaadinka(Principle of vested rights)
Mabda’a ka fogaashiyaha xeerka aan qeexnayn(Void for vagueness)
Mabda’a filashada ama naawilidda sharciga(principle of legitimate wxpectations)
Waxaan hindise-xeeredkan laga soo minguuriyay xeerar dad-yow kale oo aanan isku-diin, dhaqan iyo nidaam xeereed ahayn.
Hortabinta 1aad iyo qabyo-qoraalka asalka ee hindisaha waxaa lagu diyaariyay Afka Ingiriisiga.
Turjumidda hindise-sharciyeedka ee Afka Soomaliga waa mid si toos ah looga soo tujumay Gogol, wax tifaftir xirfadaysan ahna aan lagu samayn.
Cinwaanka hindis-sharciyeedka ama magaca xeerka oo aan raacsanayn nuxurka qoraalka ka kooban 39-ka qodob.
Eray-bixinta sharci ee qoraalka hindise-sharciyeedka oo aad u hooseysa, kana hor imaanaysa macnaha saxda ah ee erayadu ku qotomaan ee xagga luqadda caadiga iyo luqadda qaanuunka intaba(Qod.2, 5,aad).
Qoraallada hindise-sharciyeedka oo aan mararka qaar wada socon, lagana yaabo in faqradaha ku jira hal qodob ay kala xambaarsan yihiin macno iyo nuxur qaanuuneed oo kala duwan.
Erayga galmo oo ah fal ka mid ah falalka jinsiga, sidoo kale aan tilmaamayn tacaddiyada kale ee aan ahayn galmada ee ku saabsan jinsiga(Qod.3aad).
Hindise-sharciyeedka oo sheegaya dembiyo isla-markaana aan dhigayn ciqaabta loo dejiyay dembiyada la tilmaamay, haddii aan si kale u dhigno dembi bilaa ciqaab ah(guud ahaan 39-ka qodob).
Erayada Jinsi iyo galmo oo macno iyo nuxur ahaan aad u kala duwan, hase yeeshee isku sidkan mararka qaar.
Ciqaabta dembiyada xeerka lagu sheegay oo loo-celinayo ama loo tixraacayo jiraan shareecada iyo xeerka ciqaabta, iyadoon la sheegayn adillada shareecada ama qodobka xeerka ciqaabta ee dhigaya ciqaabta falka dembiga ee xeerka lagu sheegay.
Dembiyada qaar ee ku jira hindise-sharciyeedka oo ciqaabtooda loo celinayo xeer aan ahayn shareecada iyo xeerka ciqaabta, iyadoo mara-mar la arkayo in loo celinayo arrimaha qaar Xeerka Madaniga, ama xeer anshaxa oo aan la aqoon waxa uu yahay.
Dembiga Kufsiga ee lagu sheegay Hindise-sharciyeedkan oo macno iyo nuxur ahaan ka duwan yahay kan lagu sheegay 398 XC taasoo abuuray muran la xiriira ciqaabta la dabakhayo iyo xeerka la qaadanayo ama laga tagayo (Qos.12aad).
Ma qeexna nuxurka iyo ujeedka dembiyada ku xusan guud ahaan hindise-sharciyeedkan(39-ka qodob).
Waxaa ku jira hindise-sharciyeedka mugdi iyo faham la’aan ku saabsan nuxurka iyo macnaha xeereed ee dembiyada qaar.
Waxaa ku jira isburrin aad u weyn oo ay adagtahay in qodobada qaar ay yeeshaan fulin ama murti qaanuun.
Waxaa ku jira qodobo aan ka hadlayn dembiyo oo ka hadlaya siyaasad iyo talo ku wajahan hay’adaha dowladda(Qod.38aad).
Qodobada qaar oo si cad uga hor imaanaya Shareecada Islaamka(Qod.3,4, 7, 8, 9, 18, 25).
Zakariya Ismaaciil Nuur – Waa qareen, bare Jaamacadeed iyo cilmi-baare ka howl-gala Magaalada Mugdisho, wuxuu xubin ka yahay Ururka Qareennadda Soomaaliyeed, wuxuu sidoo kale La-taliye sharci u yahay hay’ada kala duwan. Waxaad kala xiriiri kartaa Zakariyei@gmail.com